BBC Somali - Warar - Ciidamo ka socda Djibouti oo gaaray Beledweyn
Ciidamo ka socda Djibouti oo gaaray Beledweyn
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 September, 2012, 05:17 GMT 08:17 SGA
Ciidamada dalka Djibouti oo ka mid ah kuwa AMISOM ayaa gaaray magaalada Beledweyne. Waxay gaarayaa ilaa 250 oo baabuur ku tagay caasimadda Hiiraan.
In ka badan laba boqol oo qof oo isugu jira maleeshiyo iyo dad rayid ah oo la sheegay in ay ka soo carareen kooxda al-Shabaab ee maamusha gobolka Shabeelaha dhexe ayaa isku soo dhiibay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya.
AMISOM, ayaa sheegtay in ilaa laba boqol maleeshiyo oo ka soo goosatay al-Shabab ay isu soo dhiibtay.
Waxaa kaloo magaalada Beledwayne ee gobolka Hiiraan gaaray ciidamo ka socda dalka Djibouti oo iyagoo baabuur wata halkaas tagay.
Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ayaa hadda ku dhow ilaa labaatan kun, iyagoo ka kala socda ilaa afar dal.
Hadaba si aan arrimahaas wax uga ogaanno, ayaa Cabdiraxmaan Koronto, wuxuu telefoonka kula xiriiray afhayeenka ciidamada AMISOM Colonel Cali Xaamud oo uu marka hore waydiiyay ciidamada Djibouti ee gaaray magaalada Beledwayne.
Saado Cali oo lagu aasay Muqdisho
Xamas: Kuma degdegeyno xabbad joojin
Ololaha lagula dagaallamayo gudniinka Fircooniga03:48